I-Olima Cold War Hack 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
I-OLIMA ICall of Duty Black Ops: Hack War Cold
Impi Yomshoshaphansi ekugcineni ingasondelelwa njengomphangi weqiniso esebenzisa u-Olima!
Yiba yilungu lesikhashana le-GamePron bese ubona ukuthi kunjani! Thenga ukhiye woMkhiqizo wosuku olungu-1 namuhla.
Noma ngabe uzame amathuluzi futhi uyawathanda, noma ufuna nje ukungena ngaphakathi, lokhu kungenxa yakho! Thenga ukhiye womkhiqizo weviki elingu-1 namuhla.
IGamePron ihlale yamukela amalungu azinikele emndenini ngomusa! Thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 namuhla.
ICold War ingenye yezikhangiso ezaziwa kakhulu zeCall of Duty esake sazibona, futhi kwaba nengqondo ukwenza i-Olima Cold War Hack yethu ukuze ifane ne-hype. Finyelela ukukopela okuzoshintsha umhlaba wakho!
COD Black Ops: Cold War Olima Hack Imininingwane
Ufuna inkohliso eqinile ezokusiza ukuthi uqede umncintiswano weCold War? Ungabe usaqhubeka, njengoba iCold War Olima Hack yethu inazo zonke izici ezidingekayo ukwehlisa amaqembu onke uwedwa. Zizwe ukuthi kunjani ukusebenzisa i-Cold War Aimbot yethu ifakwe i-FOV Circle namuhla! Yenzelwe ama-Intel ne-AMD CPU's, le nkohliso iza ngesiNgisi futhi igcinelwe ama-GPU kaNvidia ne-AMD. Ukukopela kungaphakathi futhi kulula kakhulu ukukusebenzisa, ngakho-ke noma isigebengu se-novice singazuza kumathuluzi alapha eGamePron.
Thola izici ezinhle njengeCold War Aimbot ene-FOV Circle, Smooth Aiming, Bone Prioritization, nezinye izinto eziningi ezimangazayo ezenza ukwehlisela phansi abaphikisana nabo ikhekhe. I-ESP Hack (i-Extra Sensory Perception) ifakiwe, ivumela abasebenzisi ukuthi babone abalingani babo, izitha zabo, ngisho nezinto ngaphakathi kwezindonga.
Imininingwane Yesitha (ibanga, ozakwabo, amagama, impilo)
Hlela indingilizi ye-FOV
Azikho izici ezikhethekile kodwa iyeza maduze
Mayelana ne-COD Black Ops: Hack War War Olima
I-COD Black Ops: Impi Yomshoshaphansi u-Olima ayibubufakazi bokusakaza, kepha kuseyindlela eqinile yalabo ababheke nje ukuthuthuka ngokushesha kunabanye. Kungahle kungabi kuhle ukujabulisa ababukeli bakho, kepha ilungele leyo midlalo ejulukayo eshiya izandla zakho zimangele kunanini ngaphambili! Uzofuna ukukhubaza Ukuvikelwa ngaphambi kokwethula i-Cold War Olima Hack, njengoba umbono ongamanga ungavimbela ukukopela ekusebenzeni kahle. Ungakusebenzisa lokhu ukukopela kusikrini esigcwele, futhi ungasebenzisa abalawuli nayo (inqobo nje uma usuphindaphinde wasilawula ngethuluzi).
Kungani usebenzisa i-COD Black Ops: Cold War Olima ngaphezu kwabanye abahlinzeki?
Abanye abahlinzeki bazovele bahleke ebusweni bakho uma ubuza ngezibuyekezo zamathuluzi, noma nokusekelwa kwamakhasimende, okuyinto engekho lapha eGamePron. Hhayi lokho kuphela, kepha wonke amathuluzi wethu akhelwe ukuhlala isikhathi eside, okusho ukuthi sizoqhubeka nokuwavuselela kulo lonke uhlelo lwemidlalo. Noma kunini lapho kuba khona ukuvuselelwa kwe-COD Black Ops: Impi Yomshoshaphansi, mancane amathuba okuthi ungalindela ukuthi isibuyekezo sikhishwe ngenxa yokugenca kwethu i-Cold War Olima! Ukugcina amathuluzi ethu evuselelwa kuvumela abasebenzisi ukuthi bathole isipiliyoni esihle kakhulu sokugenca nge-GamePron, futhi lokho kusisizile sazakhela igama kule minyaka embalwa edlule.
Imenyu engaphakathi komdlalo etholakala ngaphakathi kwe-COD Black Ops yethu: I-Cold War Olima Hack akulula ukufinyelela kuyo kuphela, kepha ikuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso i-hack ngendlela oyithandayo. Ungaguqula cishe zonke izilungiselelo ezihlotshaniswa ne-COD Black Ops yethu: Cold War Olima Hack, kusuka ekutheni i-aimbot izosabela ngokushesha kangakanani, ukuthi i-FOV Circle yakho izoba nkulu kangakanani. Lungiselela ukuthi yimaphi ama-ESP azobonakala ngokuqhekeka kunikwe amandla, futhi ulungise ezinye izilungiselelo maqondana neCold War Cheat yethu. Sithembe uma sithi iGamePron yeqe umncintiswano uma kuziwa kuma-hacks ethu, ikakhulukazi imenyu engaphakathi komdlalo.
Noma ngabe ukhathele ukuthembela kuma-randoms ukukusiza, noma ufuna nje ukubona ukuthi kunjani “kolunye uhlangothi”, ukusebenzisa i-Cold War Olima Cheat kuzokusiza ukunqoba ngezindlela ezingaphezu kweyodwa.
Ilungele Yengamela nge-COD BO Olima Hack yethu?